လောဘ ဒေါသ မောဟ
လောဘ – ဒေါသ – မောဟ
ရဟန်းတို့ သာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော အယူရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤသို့ မေးကုန်ငြားအံ့ ….
”ငါ့သျှင်တို့တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း၊ အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူ- တပ်မက်ခြင်း ‘ရာဂ’၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ‘ဒေါသ’၊ တွေဝေခြင်း ‘မောဟ’တို့တည်း။ ငါ့သျှင်တို့တရားတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့ ပေတည်း။
ငါ့သျှင်တို့ ဤတရားသုံးမျိုးတို့၏ ထူးခြားမှုကား အဘယ်ပါနည်း၊ ပယောဂလွန်ကဲမှုကား အဘယ်ပါနည်း၊ ကွဲပြား ခြားနားမှုကား အဘယ်ပါနည်း”ဟု မေးကုန်ငြားအံ့…
ဤသို့မေးအပ်ကုန်သော် ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် သာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော အယူရှိသော ထို ပရိဗိုဇ်တို့အား ဤသို့ ဖြေဆိုကြ ကုန်လော့ ”ငါ့သျှင်တို့ ရာဂသည် အပြစ်နည်း၏၊ ဖြည်းဖြည်း ကင်းပျောက်၏၊ ဒေါသသည် အပြစ်ကြီး၏၊ မြန်မြန် ကင်းပျောက်၏၊ မောဟသည် အပြစ်ကြီး၏၊ ဖြည်းဖြည်း ကင်းပျောက်၏”ဟု (ဖြေဆိုကြ ကုန်လော့)။ (အန ၃.၆၉)
၁. သာဠှတို့ ထို အရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကုန်သနည်း၊ လိုချင်တပ်မက်ခြင်း ‘လောဘ’ဟူသည် ရှိသလောဟု (မေး၏)။
၂. သာဠှတို့ ဤသဘောကို ‘အဘိဇ္ဈာ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠှတို့ တပ်မက်သောသူသည် မက်မောခြင်း ‘အဘိဇ္ဈာ’ များသည် ဖြစ်၍ သူ့အသက်ကိုလည်း သတ်၏၊ မပေးသည်ကိုလည်း ယူ၏၊ သူတစ်ပါး သားမယားကိုလည်း သွားလာ၏၊ မဟုတ် မမှန်သော စကား ကိုလည်း ပြော၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း ထို အတိုင်းပြုရန် ဆောက်တည်စေ၏၊
၃. ယင်းသူ့အသက်သတ်ခြင်း စသည်သည် ထိုသူအား ကြာမြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အစီးအပွါးမရှိခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ်လောဟု (မေး၏)။
ဖြစ်နိုင်ပါသည် အသျှင်ဘုရား။ (အန ၃.၆၇)
၁. သာဠှတို့ ထို အရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကုန်သနည်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း ‘ဒေါသ’ဟူသည် ရှိသ့လောဟု (မေး၏)။
၂. သာဠှတို့ ဤသဘောကို ‘ဗျာပါဒ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠှတို့ အမျက်ထွက်သော သူသည် ဖျက်ဆီးလိုသော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ သူ့အသက်ကိုလည်း သတ်၏၊ မပေးသည်ကိုလည်း ယူ၏၊ သူတစ်ပါး သားမယားကိုလည်း သွားလာ၏၊ မဟုတ် မမှန်သော စကားကိုလည်း ပြော၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း ထို အတိုင်းပြုရန် ဆောက်တည်စေ၏၊
၃. ယင်းသူ့အသက်သတ်ခြင်း စသည်သည် ထိုသူအား ကြာမြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အစီးအပွါးမရှိခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ် လောဟု (မေး၏)။
၄. ငါ့သျှင်တို့ မဖြစ်ပေါ်သေးသောဒေါသ ဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ဒေါသ တိုးပွါးပြန့်ပြောရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု အကယ်၍ မေးခဲ့ လျှင် …..
”ဒေါသဖြစ်ကြောင်း အာရုံ ‘ပဋိဃနိမိတ်’တည်း”ဟု ဖြေဆိုရာ၏။ ဒေါသဖြစ်ကြောင်း အာရုံ ‘ပဋိဃနိမိတ်’ ကို မသင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော ဒေါသသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်၏၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ဒေါသသည်လည်း တိုးပွါးပြန့်ပြောရန် ဖြစ်၏။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသည်ကား မဖြစ်ပေါ်သေးသောဒေါသ ဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဒေါသ တိုးပွါးပြန့်ပြောရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ပေတည်းဟု ဖြေဆိုရာ၏။ (အန ၃.၆၉)
၅. ငါ့သျှင်တို့ မဖြစ်ပေါ်သေးသောဒေါသ မဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောဒေါသ ပျောက်ကင်းရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်နည်းဟု အကယ်၍ မေးခဲ့လျှင်…
”စိတ်၏ (ဗျာပါဒမှ) လွတ်မြောက်ကြောင်း မေတ္တာတည်း”ဟု ဖြေဆိုရာ၏။ စိတ်၏ (ဗျာပါဒမှ) လွတ် မြောက်ကြောင်း မေတ္တာကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော ဒေါသသည်လည်း မဖြစ်ပေါ်၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ဒေါသသည်လည်း ပျောက်ကင်း၏။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသည်ကား မဖြစ်ပေါ်သေးသော ဒေါသမဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ဒေါသပျောက်ကင်းရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ပေတည်းဟု ဖြေဆိုရာ၏။ (အန ၃.၆၉)
၆. ငါ့သျှင်အာနန္ဒာ သင်တို့သည် ဒေါသ၌ အဘယ်အပြစ်ကို မြင်၍ ဒေါသပယ်ခြင်းကို ပညတ်ပါကုန်သနည်း..
ငါ့သျှင်ဆန္န အမျက်ထွက်သော သူသည် အမျက်ထွက်ခြင်း ‘ဒေါသ’ နှိပ်စက် သိမ်းကျုံးယူထားသော စိတ်ရှိရကား ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ နှုတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ စိတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ ဒေါသ ကို ပယ်သည်ရှိသော် ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်၊ နှုတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်၊ စိတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်။
ငါ့သျှင်ဆန္န အမျက်ထွက်သော သူသည် အမျက်ထွက်ခြင်း ‘ဒေါသ’ နှိပ်စက် သိမ်းကျုံးယူထားသော စိတ်ရှိရကား မိမိအကျိုးကိုလည်း ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း မသိ၊ သူတစ်ပါး အကျိုး ကိုလည်းဟုတ်မှန်သော အတိုင်း မသိ၊ မိမိ သူတစ်ပါး အကျိုးနှစ်ပါးကိုလည်းဟုတ်မှန်သော အတိုင်း မသိ။ ဒေါသ ကို ပယ်သည်ရှိသော် မိမိအကျိုးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း သိ၏၊ သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း သိ၏၊ မိမိ သူတစ်ပါး အကျိုးနှစ်ပါးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း သိ၏။
ငါ့သျှင်ဆန္န အမျက်ထွက်ခြင်း ‘ဒေါသ’ သည် ကန်းသည်ကို ပြုတတ်၏၊ ပညာမျက်စိ မရှိသည်ကို ပြုတတ်၏၊ ပညာဉာဏ်ကို မပြုတတ်၊ ပညာကို ချုပ်ကွယ်စေတတ်၏၊ ပင်ပန်းခြင်းအဖို့ ရှိ၏၊ ငြိမ်းအေးမှုကို မဖြစ်စေတတ်။ (အန ၃.၇၂)
၁. သာဠှတို့ ထို အရာကို အဘယ်သို့ မှတ်ထင်ကုန်သနည်း၊ တွေဝေခြင်း ‘မောဟ’ဟူသည် ရှိသလောဟု (မေး၏)။
၂. သာဠှတို့ ဤသဘောကို ‘အဝိဇ္ဇာ’ဟု ငါဆို၏။ သာဠှတို့ တွေဝေသူသည် အဝိဇ္ဇာနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ သူ့အသက်ကိုလည်း သတ်၏။ မပေးသည်ကိုလည်း ယူ၏၊ သူတစ်ပါး သားမယားကိုလည်း သွားလာ၏၊ မဟုတ်မမှန်သော စကားကိုလည်း ပြော၏၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း ထို အတိုင်းပြုရန် ဆောက်တည်စေ၏၊
၃. ယင်းသူ့အသက်သတ်ခြင်းစသည်သည် ထိုသူအား ကြာမြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အစီးအပွါးမရှိခြင်းငှါ ဆင်းရဲခြင်းငှါ ဖြစ်နိုင်သည် မဟုတ်လောဟု (မေး၏)။
၄. ငါ့သျှင်တို့ မဖြစ်ပေါ်သေးသောမောဟ ဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောမောဟ တိုးပွါးပြန့်ပြောရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု အကယ်၍ မေးခဲ့ လျှင် ….
”မသင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း ‘အယောနိသော မနသိကာရ’တည်း”ဟု ဖြေဆိုရာ၏။ (အာရုံဟူသမျှကို) မသင့်လျော်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော မောဟသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်၏၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မောဟသည်လည်း တိုးပွါး ပြန့်ပြောရန် ဖြစ်၏။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသည်ကား မဖြစ်ပေါ်သေးသော မောဟဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မောဟ တိုးပွါးပြန့်ပြောရန့်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ပေတည်းဟု ဖြေဆိုရာ၏။
၅. ငါ့သျှင်တို့ မဖြစ်ပေါ်သေးသောမောဟ မဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသောမောဟ ပျောက်ကင်းရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု အကယ်၍ မေးခဲ့ လျှင် …
”သင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း ‘ယောနိသော မနသိကာရ’တည်း”ဟု ဖြေဆိုရာ၏။ (အာရုံဟူသမျှကို) သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်ပေါ်သေးသော မောဟသည်လည်း မဖြစ်ပေါ်၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မောဟသည်လည်း ပျောက်ကင်း၏။ ငါ့သျှင်တို့ ဤသည်ကား မဖြစ်ပေါ်သေးသော မောဟမဖြစ်ပေါ်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော မောဟပျောက်ကင်းရန်သော်လည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့ပေတည်းဟု ဖြေဆိုရာသတည်း။ (အန ၃.၆၉)
၆. ငါ့သျှင်အာနန္ဒာ သင်တို့သည် မောဟ၌ အဘယ်အပြစ်ကို မြင်၍ မောဟပယ်ခြင်းကို ပညတ်ပါကုန်သနည်း..
ငါ့သျှင်ဆန္န တွေဝေ သော သူသည် တွေဝေခြင်း ‘မောဟ’ နှိပ်စက် သိမ်းကျုံးယူထားသော စိတ်ရှိရကား မိမိဆင်းရဲရန်ကိုလည်း လှုံ့ဆော်၏၊ သူတစ်ပါး ဆင်းရဲရန်ကိုလည်း လှုံ့ဆော်၏၊ မိမိ သူတစ်ပါး နှစ်ဦးစုံ ဆင်းရဲရန်ကိုလည်း လှုံ့ဆော်၏၊ စိတ်ကို စွဲမှီ၍ ဖြစ်သော ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာခြင်းကိုလည်း ခံစားရ၏။ မောဟကို ပယ်သည်ရှိသော် မိမိဆင်းရဲရန်ကိုလည်း မလှုံ့ဆော်၊ သူတစ်ပါးဆင်းရဲရန်ကိုလည်း မလှုံ့ဆော်၊ မိမိ သူတစ်ပါး နှစ်ဦးစုံ ဆင်းရဲရန်ကိုလည်း မလှုံ့ဆော်၊ စိတ်ကို စွဲမှီ၍ ဖြစ်သော ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာခြင်း ကိုလည်း မခံစားရ။
ငါ့သျှင်ဆန္န တွေဝေသော သူသည် တွေဝေခြင်း ‘မောဟ’ နှိပ်စက် သိမ်းကျုံး ယူထားသော စိတ်ရှိရကား ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ နှုတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ စိတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်၏။ မောဟကို ပယ်သည်ရှိသော် ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်၊ နှုတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်၊ စိတ်ဖြင့် မကောင်းသော အကျင့်ကို မပြုကျင့်။
ငါ့သျှင်ဆန္န တွေဝေသောသူသည် တွေဝေခြင်း ‘မောဟ’ နှိပ်စက် သိမ်းကျုံးယူထားသော စိတ်ရှိရကား မိမိအကျိုးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း မသိ၊ သူတစ်ပါးအကျိုး ကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း မသိ၊ မိမိသူတစ်ပါး အကျိုးနှစ်ပါးကိုလည်းဟုတ်မှန်သော အတိုင်း မသိ။ မောဟကို ပယ်သည်ရှိသော် မိမိအကျိုးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း သိ၏၊ သူတစ်ပါး အကျိုးကိုလည်းဟုတ်မှန်သောအတိုင်း သိ၏၊ မိမိ သူတစ်ပါး အကျိုးနှစ်ပါးကိုလည်းဟုတ်မှန်သော အတိုင်း သိ၏။
ငါ့သျှင်ဆန္န မောဟသည် ကန်းသည်ကို ပြုတတ်၏၊ ပညာမျက်စိ မရှိသည်ကို့ပြုတတ်၏၊ ပညာဉာဏ်ကို မပြုတတ်၊ ပညာကို ချုပ်ကွယ်စေတတ်၏၊ ပင်ပန်းခြင်းအဖို့ ရှိ၏၊ ငြိမ်းအေးမှုကို မဖြစ်စေတတ်။ (အန ၃.၇၂)